Seattle mankany Portland: 8 Zavatra Hitazana eny an-dalana
Ny fitaterana avy any Seattle mankany Portland dia tokony ho adiny telo na adiny, arakaraka ny fifamoivoizana sy ny hoe impiry ianao no mijanona. Azo antoka, tsy dia lavitra ilay fiara ary tsy misy antony tena tokony hajanona ... afa-tsy hoe misy zavatra saro-bidy tsara eny an-dàlana hijery. Mialà aloha maraina ary ampio tranom-bolo vitsivitsy ho amin'ilay dia. Manaova andro iray. Manana fahafinaretana! Ireto misy soso-kevitra sasantsasany ho an'ireo atleta any Washington Washington mety hanasongadina ny fiarao.
Tsidiho ny tranom-bakoka ao Tacoma
Tokony ho 40 minitra eo atsimon'i Seattle manomboka amin'ny Exit 133, ny Tacoma afovoan-tanàna dia lasa malaza amin'ny tranombakoka. Tacoma no hany tanàna any Washington izay nahavita naka ny tranom-bakoka ho azy ireo akaiky ny tsirairay ka mora ny manalavitra azy, na misafidiana iray fotsiny hijery ary avy eo dia mandeha. Eo amin'ny I-5, ny tranom-bakoka Tacoma ao afovoan-tanàna dia ahitana ny Tranombakoka Art Tacoma , Museum of Glass, ny Museum History of Washington State ary ny LeMay - Car Museum Amerikana . Raha toa ianao ka misafidy iray ihany ary tsy manana lohahevitra manokana ao an-tsaina, ny tranom-bakoka sy tranom-bakoka dia misy safidy tsara. Omeo ora iray farafahakeliny mba hamakivaky ny iray amin'ireo.
Fantaro ny Fialofana An-dranomasina Nisqually
Raha te handeha eo amin'ny sisin-damba ianao, alao ny faran'ny Tacoma mankany amin'ny Nisqually National Wildlife Refuge, izay manakaiky ny Exit 114. Io toeram-pilasiana feno fandriampahalemana io dia mandeha manerana ny faritra hazo sy tanimboly ahitana mpitsidika mahita maromaro, ary ahitana karazany toy ny karazana vorona 200, biby toy ny lôtôra na mpanangona, ary trondro. Mety sao dia mety hahita biby maro ianao, na izany aza, miankina amin'ny fitsidihanao sy ny fisehony amin'ny masonao, fa ity toerana voajanahary ity dia mbola toerana mahafinaritra hotsidihina.
Jereo ny Capitol
Ny Capitol any amin'ny State of Washington dia miorina amin'ny Exit 105 ao Olympia ary azonao atao ny mijery azy amin'ny lalambe. Ny toeram-ponenana Capitol dia toerana tsara handehanana, indrindra amin'ny lohataona rehefa miposaka ny kiriodra na amin'ny tolakandron'ny tolakandro rehefa miova ny ravina. Ny tobim-pahasalamana dia akaiky ny afovoan-tananan'i Olympia, izay kely ihany koa, fa misy trano fivarotana sy trano fisakafoanana. Manodidina ny adiny iray any atsimon'i Seattle io toerana io, ary misy ifandraisany tsara amin'ny toerana misy azy, ary raha te-hanaisotra kokoa ny Capitol ianao, dia afaka maimaim-poana ny fandehanan'ny besinimaro. Natolotra ora isam-bolana izy ireo eo anelanelan'ny 10 am sy 3 ora tolakandro, ary isaky ny ora 11 ka hatramin'ny 3 hariva amin'ny faran'ny herinandro.
Mividy ny Centralia Outlet Mall
Mila fividianana fividianana? Ny Mall Centralia Outlet ivelan'ny Exit 82 dia ampy tsara hanolotra fivarotana marobe, saingy kely loatra ka tsy hahalasa anao ela loatra ny hahita izay ilainao (raha tsy te-handany fotoana vitsivitsy hanamboaranao fifanarahana ianao)! Ny fivarotana ao amin'ny magazay dia ahitana zavatra kely, avy amin'ny Coach Outlet mankany Bath & Body Works Outlet any amin'ny fivarotana kiraro ary toerana vitsivitsy hihinanana. Ny tranokala dia miorina amin'ny toeram-pivarotana mozika fa tsy tranobem-pifamoivoizana an-trano, ka azonao atao ny mijanona eo akaikin'ny toeram-pivarotana tianao halaina fotoana bebe kokoa.
Atsaharo ny Monospace Gospodor
Indraindray mila manintona kely ianao eo amin'ny fiainanao ary sarotra ny manadino ny Monografian'ny Gospodor. Mazava ho azy fa azo jerena tsara izy ireo rehefa mandalo eo amin'ny làlambe satria lehibe izy ireo ary akaikin'ny làlana, fa raha mamely anao izy ireo ho mahaliana kokoa noho ny mavesatry ny flyby, dia esory amin'ny Exit 63 ny mijery azy ireo akaiky. Ireo sangan'asa metaly ireo dia mistery. Izy ireo dia natsangan'i Dominic Gospodor, izay nandany mihoatra ny 1 tapitrisa dolara nametraka azy ireo. Ny hevitr'izy ireo dia ny hoe ny mistery mandainga. Ireo sarivongana dia mampiseho an'i Jesoa, Indianina Amerikana sy Teresa Teresa ary natao hankalaza ny Holocaust, ny finoana kristianina ary ny tolona ataon'ny Amerikana indianina.
Mandehana any amin'ny Hulda Klager Gardas
Raha tia ny zava-drehetra, mijanòna any amin'ny Hulda Klager Gardac Gardens any Woodland. Ny zaridaina dia nambolena tao Klager tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-18 ary manana mari-pamantarana vetivety Victoriana. Mandosira ny lalana eny an-jaridaina ary hahita ireo karazana voninkazo sy hazo ary kirihitr'ala, fa mazava ho azy fa aza manadino ny lilacs, izay eo an-tampony amin'ny faran'ny lohataona. Ny zaridaina dia misokatra isan-taona amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 hariva isan'andro ary misy foana ny mijery.
Okay, noho izany dia iray lozam-pifamoivoizana lehibe ity raha ny tanjonao dia ny haka an'i Seattle ho any Portland. Na izany aza, raha ny tanjonao dia ny hahita zavatra tsara eny an-dalana, Mt. Hanao ny fanitsakitsahana i St. Helens. Raiso ny 49 amin'ny Highway 504 ary manantena ny handroaka kely iray isan'ora eny amin'ny arabe. Hahita fotoana kely hijerena ihany koa ianao rehefa manao ny lalanao mankany amin'ny Johnston Ridge Observatory izay ahitanao ny fomba fijery mahatalanjona momba ilay tendrombohitra sy ny mpitaingina azy, fa afaka mijery sarimihetsika momba ny fipoahana ihany koa.
Mpiara-miasa ao Vancouver
Ho an'ny fijanonana farany alohan'ny handehananao manerana ny tetezana ao Portland, ny Officers Row any Vancouver dia toerana mendrika raha tianao ny tantaran'ny tafika, ny architecture, na ny dian-tongotra fotsiny. Ny "laharana" dia famolavolana toerana 34 manan-tantara, maro amin'ny fomba Victoriana, izany daty nanomboka tamin'ny taona 1800 tany ho any. Ny ankamaroan'ny tokantrano dia indray mandeha ho an'ny manamboninahitra miaramila maro (noho izany ny anarana) izay nijanona tao Fort Vancouver. Ny sasany misokatra ho an'ny besinimaro, toy ny Tranon'i George C. Marshall.
Taom-baovao vaovao tao Seattle sy Tacoma
Toeram-pisakafoanana miaraka amin'ny Scenic View any Seattle
Ny Theatr tsara indrindra ao Seattle / Tacoma
Seattle mankany Spokane: 5 Zavatra Hitazana eny an-dalana
Sehatrasan'ny mpizaha tany Seattle - On sy Off ny lalaovina
Avy amin'ny Mild to Wild - Ny tsara indrindra any Nightlife any Seattle
Ny 9 Best Hotels in Marrakech tamin'ny 2018
Mijanona ao amin'ny Grand Lido Negril any Jamaika
10 Fomba Fomba Momba ny Tantaran'ny Pizza
Fialan-tsasatra ao amin'ny fianakaviana ao Oregon
Fandefasana fitsangatsanganana ho any Fidji
Trout Lake & John Hendry Park: Izay rehetra tokony ho fantatrao
99 zavatra malalaka atao any Minneapolis sy St. Paul
Manao ahoana ny fihetseham-ponao?
20 Sary avy amin'ny Trek avy any Yuksom mankany Dzongri Peak any Sikkim
Mandeha amin'ny fiarandalamby any Eoropa: Aiza, nahoana ary ahoana
Fomba hankalaza ny taombaovao amin'ny lembalemba Silicon
Epicurience Virginia 2016: Dihy sy Sakafo Sakafo